ပြည်မြို့ လူသတ်မှု မသင်္ကာသူ ၂ ဦး ဖမ်းမိ၊ တဦး လွတ်နေ | ဧရာဝတီ
ကောင်းမြတ်မင်း| April 24, 2013 | Hits:13,357
| | အကြမ်းဖက် လုယက်ခံခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီးကို ပြည်မြို့ ဆေးရုံပေါ်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ကောင်းမြတ်မင်း / ဧရာဝတီ)
တိုက်ပွဲများကြောင့် DKBA တပ်သား ၅ ဦး သေဆုံး၍ အစိုးရစစ်သား၂ ဦးဒဏ်ရာရပျောက်ဆုံး ထိုင်း ရဟတ်ယာဉ် ရှာဖွေရန် တရုတ် ကျွမ်းကျင်သူများ ရောက်ရှိရန်ကုန်၌ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန် မှုခင်း များပြားလာခြင်း အပေါ် လွှတ်တော် အမတ်များ ဝေဖန်လားရှိုး မြို့မဈေးတွင် နေ့လယ်အချိန် ရွှေဆိုင်တဆိုင် အနုကြမ်းစီးခံရထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မှာ လူကုန်ကူးဂိုဏ်း ဖမ်းမိ
Lunthi April 25, 2013 - 6:56 am It is sad that soldiers are no. 1 criminals in Burma. Rapes and murders happen to the ethnic area for the last sixty years. Since the crime was committed in public area, the policemen and criminal court better handle the case. I do not trust the military court that they might be treat so leniently.
Reply mgoogyaw April 26, 2013 - 12:04 am True,3 Ko Lun Thi. Did you remember about happen to the Army Officer that killed2young men in Bagoe,last2years,may be he and his soldiers are really be free by now,because they are soldiers????? Is’nt it ???
Reply Native Burman May 2, 2013 - 5:17 am Yes. That is what we all are talking about. No news has been read or heard about those criminals in Bago. You are right about that.
Reply ရန်အောင်ဗိုလ် April 25, 2013 - 4:29 pm သက်သက် ကြီး အနိင် ကျင့် တဲ့ ကိစ္စ ပဲ ။ တို့ ပြည်သူ ပြည်သား တွေ သွေး မကြောင် ကျ စမ်း ပါ နဲ့ ဒီတိုင်း လက် ပိုက် ကြည့် နေ ကျတော့ မှာ လား။ ဟို ခွေး တိရစ္ဆာန် တွေ ဘက် က တာ ဝန် မယူ တဲ့ အပြင် စစ် ပြေး တွေ ဆို ပြီး ဗြောင်လိမ် ဖို့ လုပ်နေ ပြီ ။ တလော က နာရီ ဆိုင် က ဒေါ် နီနီအောင် အသတ် ခံ ရတာ လဲ ခု ထိ မပေါ် သေးဘူး။ ပြည်သူ တွေ ဒီတိုင်း ကြည့် မနေ ကျ ပါနဲ့ တော့။ အမှန် တရား ဘက် က နေပေးကျပါ။
Reply kyawnyunt April 25, 2013 - 9:38 pm တပ်ရဲ့ရုပ်ကတော့ဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာပြီ။သတိထားကြ။